Semalt: Olee otú iji wepụ saịtị? - Top Atụmatụ
Nchacha bụ usoro ahịa nke ndị ọrụ weebụ jiri wepụ ọtụtụ data site na ebe nrụọrụ weebụ. Ndị a maara dịka owuwe ihe ubi, ntanetị weebụ gụnyere nbudata data na ọdịnaya site na ibe ma ọ bụ na saịtị ahụ dum. Usoro ndị a na-eji ndị na-ede blọgụ, ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ, na ndị ahịa na-azụ ahịa na-emepụta ma chekwaa ọdịnaya n'ime protocols ndị nwere ike ịme mmadu.
N'ọtụtụ ọnọdụ, data weghachite sitere na weebụsaịtị bụ ọkachasị n'ụdị ihe oyiyi ma ọ bụ protocol HTML. Nbudata ibe weebụ ibe gị aka bụ ụzọ a na-ejikarị eme ihe iji wepụ ihe oyiyi na ederede site na saịtị ntanetị. Webmasters na-ahọrọ na ịchọta ihe nchọgharị iji zọpụta peeji nke site na saịtị scrape site na iji iwu ozugbo. I nwekwara ike wepu data sitere na ebe nrụọrụ weebụ site na iwepụta ọdịnaya-ederede n'ime nchịkọta ederede gị.
Iji usoro nchịkọta weebụ
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ịdọpụpụta ọtụtụ data site na saịtị, tụlee ịnye ngwa weebụ scraping a gbara. Ihe ntanetị weebụ na-arụ ọrụ site n'ibudata nnukwu data sitere na weebụsaịtị. Akụrụngwa na-echekwa data amịpụtara na usoro na protocols nke ndị ọbịa gị nwere ike ịgụ.
Maka webmasters na-arụ ọrụ n'ịwepụ data site na saịtị na oge etiti oge, bots na spiders bụ ngwaọrụ kachasị mma iji mee. Bots na-enweta data site na saịtị scrape n'ụzọ dị irè ma zọpụta ozi na datasheets.
Gini mere wepu data?
Ntanetị weebụ bụ usoro eji eme ihe dị iche iche .. N'ahịa ahịa dijitalụ, ịkwalite mmekọrịta gị na ndị ọrụ njedebe bụ nke kachasị mkpa. Iji nwee mkparịta ụka mmekọrịta na ndị ọrụ, ndị na-ede blọgụ na-esi ọnwụ na-ehichapụ data sitere na scrape
Nkọwa data maka ihe ndị na-adịghị na ntanetị
Ụfọdụ webmasters na ndị na-ede blọgụ na-enweta data na kọmputa ha maka nlele oge na-aga. N'ụzọ dị otú a, ndị webmasters nwere ike nyochaa ma chekwaa data amịpụtara na-enweghị ike ijikọ na Ịntanetị ngwa ngwa.
Nwale nkedo njikọta
Dịka onye mmepụta weebụ, ị ga-elele njikọ na njikọ dị na ebe nrụọrụ weebụ gị. N'ihi nke a, ndị mmepe weebụ na-emecha nyochaa ebe nrụọrụ weebụ ha iji nwaa maka ihe oyiyi, ọdịnaya, ma jikọta na ibe saịtị ha. N'ụzọ dị otú a, ndị mmepe nwere ike ịgbakwunye ngwa ngwa ma weghachite njikọ ndị gbawara na weebụsaịtị ha
Google ha s otu ụzọ nke ịmepụta republished ọdịnaya. Ntughari-ichikota ọdịnaya site na ebe nrụọrụ weebụ scraping iji bipụta ya na saịtị gị bụ iwu akwadoghị ma nwee ike iduga mmechi nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Ejiri ọdịnaya aha dị iche iche dị ka mmebi nke usoro na ụkpụrụ nduzi na-achịkwa otú saịtị si arụ ọrụ.
Imebi iwu nwere ike ime ka ndị na-ede blọgụ, ndị webmasters, na ndị ahịa na-agba akwụkwọ. Tupu ibudata na ịtọpụ ọdịnaya na ihe oyiyi sitere na saịtị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgụ ma ghọta usoro nke usoro iji zere ịbụ ndị a na-ekpe ikpe na ndị ikpe na-akwado iwu.
Nchịkọta weebụ ma ọ bụ owuwe ihe ubi weebụ bụ ụzọ ndị ahịa na-eji eme ihe iji wepụ data dị ukwuu site na saịtị scrape. Nbudata gụnyere nbudata saịtị ahụ ma ọ bụ ibe weebụ. N'oge a, ndị ntanetị weebụ na-eji ntanetị weebụ eme ihe iji nwalee njikọ ndị gbawara na saịtị ha Source .